Sanduuqa Relief Coronavirus
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Dawlada Hoose|Sanduuqa Relief Coronavirus
Lacagta Gargaarka ee Dawlada Hoose ee Coronavirus
Magaalooyinka iyo degmooyinku waxay qaadayaan talaabooyin aan caadi ahayn si ay u badbaadiyaan deggeneyaashooda inta lagu gudajiray Cudurka faafa ee COVID-19 iyagoo sii wadaya bixinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada ay ku tiirsan yihiin. Ganacsigu wuxuu dhaqaajiyaa doolarkan muhiimka ah si bulshada ay u daboosho kharashaadka halista ah ee ka dhashay xaaladaha degdega ah ee COVID-19, oo ay ku jiraan go'doominta iyo goobaha karantiillada, shaqaalaha iyo soo iibinta agab caafimaad iyo qalab loogu talagalay daryeelka caafimaadka, iyo qorsheynta dib u furista iyo soo kabashada nabdoon.
Lacagaha waxaa la heli karaa sida ku xusan qeybta 601 (a) ee Sharciga Sooshiyaal Sikiyuuriti, oo lagu daray qeybta 5001 ee Coronavirus Aid, Relief, iyo Economic Security Act ("CARES Act").
Qaatayaasha iyo abaalmarinta
Lacag ayaa la siin doonaa magaalooyinka iyo degmooyin ay ku nool yihiin dad kayar 500,000 oo aan u qalmin inay helaan maalgelin toos ah sida uu dhigayo Xeerka DARYEELKA. Magaalooyinka iyo degmooyinka ka hooseeya 500,000-qof ayaa heli doona qaybinta qofkiiba. Degmooyinka waxay heli doonaan qaybinta ugu yar ee $ 300,000 iyo $ 30,000 magaalooyinka iyo magaalooyinka. Qoondaynta qaybinta gaarka ah waxaa go'aamiyay Xafiiska Maareynta Maaliyadeed. Guji halkan liistada oo dhameystiran oo ah dowladaha hoose iyo abaalmarintooda waxaa laga helayaa Sanduuqa Coronavirus Relief Funds (CRF).
Kharashaadka waa in loo adeegsadaa talaabooyinka la qaaday si looga jawaabo xaalada degdega ah ee caafimaadka bulshada.
Marka loo eego Xeerka CARES, Lacagta Gargaarka ee Coronavirus ayaa loo isticmaali karaa in dib loogu celiyo dawladaha hoose iyada oo laga jawaabayo xaaladda degdegga ah ee caafimaadka bulshada ee COVID-19 inta lagu jiro muddada bisha Maarso 1, 2020 illaa Noofember 30, 2020 *.
Kuwaas waxaa ka mid noqon kara kharashaadka la galay si loogu oggolaado dawladda hoose inay si toos ah uga jawaabto xaaladaha degdegga ah, sida iyadoo wax laga qabanayo baahiyaha caafimaad ama caafimaadka bulshada, iyo sidoo kale kharashyada ka jawaab celinta saamaynta labaad ee xaaladda degdegga ah, sida taakulaynta dhaqaale ee kuwa dhibaataysan shaqada ama carqaladeynta ganacsiga sababo la xiriira xirnaanshaha ganacsiga ee la xiriira COVID-19.
Lacagaha waa laga yaabaa MA waxaa loo isticmaali doonaa in lagu buuxiyo gaabinta dakhliga dowladda si loo daboolo kharashyada aan u qalmi lahayn sharciga. In kasta oo adeegsiyo kala duwan la oggol yahay, beddelka dakhliga maahan adeegsiga la oggol yahay ee lacagaha Sanduuqa.
Lacag bixinta ayaa laga yaabaa MA loo adeegsado in lagu daboolo kharashaadka ku xusan miisaaniyada ee dhowaan la ansixiyay ilaa iyo 27-kii Maarso, 2020. Miisaaniyadda "dhawaanta la ansixiyay" waxaa loola jeedaa miisaaniyadda la meel-mariyay ee ku habboon muddada maaliyadeed ee khuseysa dowladda gaarka ah. Kharashka looma tixgelinayo in lagu xisaabtamo miisaaniyad kaliya maxaa yeelay waxaa lagu bixin karaa iyada oo la adeegsanayo sanduuqa xasilinta miisaaniyadda, sanduuqa maalinta roobka, ama koontada keydka ee la midka ah.
Kharashaadka la oggol yahay waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn:
Kharashyada caafimaadka sida:
Kharashyada la xiriira COVID-19 ee isbitaalada dadweynaha, rugaha caafimaadka, iyo tasiilaadka la midka ah.
Kharashka bixinta baaritaanka COVID-19, oo ay ku jiraan baaritaanka serological.
Kharashyada ka jawaab celinta caafimaadka degdegga ah, oo ay ku jiraan gaadiidka caafimaadka degdegga ah, ee la xiriira COVID-19.
Kharashaadka lagu aasaasayo laguna shaqeynayo awoodaha telemedicine ee dawada la xiriirta COVID-19.
Kharashyada caafimaadka bulshada sida:
Kharashaadka isgaarsiinta iyo fulinta ee Gobolka, Territoriga, dowladaha hoose, iyo dowladaha qabiilooyinka ee amarada caafimaadka bulshada ee laxiriira COVID-19.
Kharashaadka ku baxa helitaanka iyo qeybinta sahayda caafimaadka iyo ilaalinta, oo ay ku jiraan nadaafada wax soo saarka iyo qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed, shaqaalaha caafimaadka, saraakiisha booliska, shaqaalaha bulshada, adeegyada ilaalinta caruurta, iyo saraakiisha daryeelka caruurta, adeeg bixiyeyaasha tooska ah ee waayeelka iyo shakhsiyaadka naafada ah ee bulshada. dejinta, iyo shaqaalaha kale ee caafimaadka bulshada ama badbaadada ee la xiriira xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha ee COVID-19.
Kharashaadka jeermiska lagu dilo meelaha dadweynaha iyo xarumaha kale, g., guryaha dadka waayeelka ah, iyada oo laga jawaabayo xaaladda degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha ee COVID-19.
Kharashaadka ku saabsan caawimaadda farsamo ee maamulka deegaanka ama hay'adaha kale ee yareynta khataraha la xiriira COVID-19 ee la xiriira caafimaadka bulshada iyo badbaadada.
Kharashaadka talaabooyinka badbaadada bulshada ee la qaaday iyadoo laga jawaabayo COVID-19.
Kharashaadka karantiilinta shaqsiyaadka.
Kharashaadka mushahar bixinta ee badbaadada dadweynaha, caafimaadka bulshada, daryeelka caafimaadka, adeegyada aadanaha, iyo shaqaalaha la midka ah ee adeegyadooda si weyn ugu heellan yareeynta ama ka jawaab celinta xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha ee COVID-19.
Kharashyada ficillada si loo fududeeyo u hoggaansanaanta tallaabooyinka caafimaadka dadweynaha ee la xiriira COVID-19, sida:
Kharashaadka ku baxa gaarsiinta cuntada ee dadka deegaanka, oo ay ku jiraan, tusaale ahaan, waayeelka iyo dadka kale ee nugul, si ay ugu suuro gasho u hogaansanaanta taxadarka caafimaadka bulshada ee COVID-19.
Kharashaadka lagu fududeeyo barashada masaafada, oo ay kujirto hormarinta teknolojiyada, ee laxiriira xiritaanka iskuulka si ay awood ugu yeelato u hogaansanaanta taxadarka COVID-19
Kharashaadka lagu hagaajinayo awoodaha shaqada ee shaqaalaha dawladda si ay awood ugu yeeshaan u hoggaansanaanta taxaddarka caafimaadka bulshada ee COVID-19.
Kharashaadka la siinayo shaqaalaha bukaanka ah iyo kuwa lacagta la siinayo iyo fasaxa caafimaad ee shaqaalaha dawlada si ay ugu suuro gasho u hogaansanaanta taxadarka caafimaadka bulshada ee COVID-19.
Kharashaadka laxiriira COVID-19 ee laxiriira ilaalinta xabsiyada gobolka iyo jeelasha gobolka, oo ay kamidtahay laxirirka fayadhowrka iyo hagaajinta talaabooyinka fogeynta bulshada, si loogu suurtogaliyo u hogaansanaanta taxadiyada caafimaadka bulshada ee COVID-19.
Kharashaadka daryeelka dadka hoylaawayaasha ah ee la bixiyay si loo yareeyo saameynta COVID-19 loona suurtageliyo u hoggaansanaanta taxaddarka caafimaadka dadweynaha ee COVID-19.
Kharashaadka laxiriirta bixinta taageero dhaqaale ee laxariirta COVID-19 xaalada caafimaad ee degdega ah, sida:
Kharashaadka laxiriira bixinta deeqaha la siiyo ganacsiyada yar yar si dib loogu soo celiyo kharashaadka ku baxa hakadka ganacsiga ee ka dhashay xirnaanshaha loo baahan yahay.
Kharashaadka laxiriira barnaamijka taakuleynta mushahar bixinta ee Gobolka, Territoriyan, maxalliga ah, ama dowlad-beeleedka.
Kharashaadka caymiska shaqo la'aanta ee laxiriira COVID-19 xaalada caafimaad ee deg-degga ah hadii kharashaadkaas aysan dib ubixin doonin dowlada federaalka iyadoo la raacayo sharciga CARES ama si kale.
Kharashaad kasta oo kale oo laxiriira COVID-19 ayaa macquul ahaan lagama maarmaan u ah shaqada dowladda ee qancisa shuruudaha u qalmitaanka Sanduuqa.
Jadwalka Kharashka U Qalma
Deeq-bixiyeyaasha waxaa lagu soo oogay go'aaminta in kharashku u qalmo iyo in kale oo ku saleysan Tilmaamaha Hantidhowrka Mareykanka iyo sida ku xusan baaxadda qandaraaska deeq-bixiye ee shaqada ee Ganacsiga.
Si looga caawiyo maamullada go'aankan, Ganacsigu wuxuu soo saaray a imtixaanka kharashka u qalmida. Tijaabadani waxay siineysaa maamul kasta awood buuxda oo ay ku sameyso wicitaan ku habboon xaalad kasta.
TEST - Haddii dhammaan jawaabaha kharashka qaaska ah ay "run yihiin" dhammaan shanta bayaan ee hoos ku xusan, markaa maamul-goboleed wuxuu dareemi karaa kalsooni in kharashku u qalmo:
Kharashku wuxuu kuxiranyahay xaalada deg degga ah ee COVID-19.
Kharashku waa “lagama maarmaan”
Kharashku ma ahan mid buuxinaya hoos u dhac ku yimid dakhliga dowladda.
Kharashka laguma maalgelinayo shey kale oo miisaaniyadeed ah, qoondeyn ama qoondayn ah, laga bilaabo Maarso 27, 2020.
Kharashku ma jiri doono la'aantiis COVID-19 AMA wuxuu noqon lahaa ujeedo “aad u kala duwan”.
Waa mas'uuliyad maamul kasta inuu qeexo “lagama maarmaan"Ama"si weyn u kala duwan”, Iyadoo la siinayo awooda maamulka iyo dabacsanaanta ay ku gaari karaan go’aankooda.
Tixgelin dheeraad ah - Ujeeddada maaliyaddan ayaa ah in laga caawiyo gobollada inay daboolaan Saameyn deg deg ah ee xaaladda degdegga ah ee COVID-19. Labaduba waxay toos ugu kacayaan awooda maamulka iyo kharashka ku baxaya bulshadooda. Waxaa jira kharashyo badan oo suurtagal ah oo u qalma.
Kharashaad badan ayaa si cad u qalma kuwa kalena waxay ku jiraan meelo cirro leh. Mid ayaa laga yaabaa inuu qiil ka bixiyo qaar ka mid ah kharashka “aagga cirro” oo ku saleysan imtixaanka, laakiin si toos ah ayey wax uga qabanayaan Saameyn deg deg ah? Suurtagal maaha Xaaladahan oo kale waxay noqon kartaa mid amaan ah oo ku habboon in loo isticmaalo lacagaha mid ka mid ah qaybaha kale ee badan ee u qalma ee si cad u buuxinaya ujeeddada lacagta. Mar labaad, awood kasta waxay awood buuxda u leedahay inay sameyso wicitaankii ugu dambeeyay iyadoo lagu saleynayo duruufahooda iyo qiilkooda.
Fadlan xor u noqo inaad isticmaasho Liiska Hubinta Qiimeynta U qalmida si looga caawiyo go'aaminta kharashyada u qalma maamulkaaga.
Kahor helitaanka lacagaha, qandaraas ayaa loo baahan doonaa in lagu fuliyo inta u dhexeysa hay'adaha dowladda hoose iyo gobolka. Waraaqaha abaalmarinta oo leh tilmaamo dheeri ah oo lagu bilaabayo hawsha qandaraaska waxaa emayl loogu diri doonaa magaalooyinka iyo gobollada hela qoondaynta 1-2 toddobaadyada soo socda, illaa iyo May 22nd.
Dhamaan abaal-marinnada waxaa looga baahan doonaa inay dejiyaan lambar SWV si lacagaha loogu diro elektaroonig ahaan. Fadlan ka hel tilmaamo faahfaahsan halkan: Xafiiska Maamulka Maaliyadda. Waxay qaadan kartaa illaa saddex toddobaad ka dib soo gudbinta macluumaadkan si akoon elektiroonig ah loogu wareejiyo.
Lacagta waxaa lagu bixin doonaa iyada oo ku saleysan lacag celin kaliya. Abaalmarinta ayaa ku soo gudbin doonta codsiyada lacag-bixinta iyada oo loo marayo nidaamka qaansheegadka qaan-gooynta ee Ganacsiga. Qaan-sheegashadu waa inay ku jiraan burburin faahfaahsan oo ku saabsan kharashyada ka soo baxay qayb kasta oo miisaaniyad u-qalma. Dhammaan abaal-marinnadu waxay caddeyn doonaan kharashyada qaansheegad kasta oo la oggol yahay halkii Tilmaamaha Hantidhowrka CRF.
* Fadlan ogow: Si loo hubiyo in dhammaan abaal-marinnada iyo kharashyadooda ay galeen ee looga jawaabayo xaaladda degdegga ah ee COVID-19 la bixiyo illaa Diseembar 30, 2020 halkii maalinba Tilmaamaha Hantidhowrka CRF, kharashaadka waxaa kaliya laga aqbalayaa kharashaadka galay ilaa Nofeembar 30, 2020. Dhammaan codsiyada ugu dambeeya ee magdhawga waa in la soo gudbiyaa ugu dambayn Diseembar 15, 2020.
Ganacsigu wuxuu ka shaqeynayaa sidii hawsha qandaraaska looga dhigi lahaa mid deg deg ah oo fudud intii suurtagal ah. Fadlan sii wad hubinta boggan wixii macluumaad dheeraad ah.
Soo gudbinta shuruudaha
Qaan-sheegasho kasta oo la soo gudbiyey waa inay ku jirtaa kala-goynta faahfaahsan ee kharashyada ka soo baxay qayb kasta oo miisaaniyadeed oo u-qalma iyo wadarta kharashyada u-qalma ee laga warbixinayo ee looga jawaabayo xaaladda degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha ee COVID-19 La socoshada qaansheegad kasta waa inay noqotaa shahaadada A-19 iyo warbixinta waxqabadka A-19:
A dhammeystiray Shahaadada A-19:
Shakhsiga loo idmay inuu soo gudbiyo codsiyada lacag celinta isagoo ka wakiil ah dowladda hoose waa inuu ku caddeeyaa isagoo saxiixaya dukumentigan in walxaha iyo kharashyada halkan ku qoran iyo kuwa la socda ee A-19 Foojarka ay yihiin u-qalmo kharashyo loogu talagalay kharashyada lagama-maarmaanka ah ee ku yimid COVID-19 caafimaadka dadweynaha xaalad deg-deg ah oo aan hore loogu xisaabtamin miisaaniyadii ugu dambaysay ee la ansixiyay laga bilaabo Maarso 27, 2020, iyo in lacagta loo isticmaalay si waafaqsan qaybta 601 (a) ee Sharciga Sooshiyaal Sikiyuuriti, sida lagu daray qaybta 5001 ee Gargaarka Coronavirus, Gargaarka, iyo Sharciga Amniga Dhaqaalaha ("CARES Act").
A dhammeystiray A-19 Warbixinta Waxqabadka (tilmaamaha lagu daray dukumintiga):
Waa in loo soo gudbiyaa xaashiyaha 'Excel', oo aan ahayn PDF, oo ay ku jiraan wadarta guud ee dhammaan codsiyada soo celinta hore iyo wadarta guud ee lacagaha lagu codsaday codsashada dib-u-bixinta hadda ee qayb-hoosaad kasta oo khuseeya.
Ku dar burburka faahfaahsan ee kharashyada shaqsiyeed ee u-qalma ee ay soo sheegeen qayb-hoosaad kasta.
Ku dar sharaxaad kooban oo ku saabsan isticmaalka lacagaha la codsanayo qayb kasta oo ku habboon. Ka dhig sharraxaadda mid kooban sida ugu macquulsan, laakiin ku dar macne ku filan si loo muujiyo sida lacagahaasi wax looga qabtay xaaladda degdegga ah ee COVID-19.
Soo gudbinta oo aan dhameystirneyn ama si qaldan loo diyaariyey waxay keeni kartaa daahitaan lacag bixin ah. Rasiidhada ama caddeynta bixinta kharashka dhacay looma baahna in loo gudbiyo Ganacsiga. Xuduudaha ayaa wali looga baahan yahay inay ilaaliyaan diiwaanada xisaabaadka ee ku filan si waafaqsan sharciyada gobolka iyo federaalka; waxayna mas'uul ka yihiin ilaalinta diiwaanada saxda ah ee saxda ah ee barnaamijka, kana dhigaya kuwo marin u leh Ganacsiga iyo Hantidhawrka Gobolka. Booqashooyinka kormeerka waa la qorsheyn karaa.
Talooyin & Casharro laga Bartay: soo gudbinta A-19s ee lacag-celinta khadka tooska ah
Waxaan dhibaato ku qabaa inaan ku arko qandaraaskeyga Nidaamka Maamulka Qandaraaska. Maxaan sameeyaa
Raadi noo Buugga Isticmaalaha CMS (PDF) erey muhiim ah oo laxiriira arintaada.
La xiriir Maamulaha Barnaamijkaaga
Wadarta guud ee ku saabsan Warbixintayda Waxqabadka ee A-19 ayaa ka jaban boqolkiiba hal. Arrintaasi ma jirtaa?
Wadarta guud ee ku saabsan Warbixinta Waxqabadka A-19 waa inay u dhigantaa - si sax ah - wadarta guud ee faahfaahinta A-19. Si loo daaweeyo dhibaatadan dheeriga ah:
Hubso in xaashida 'excel xajmiga' u wareegto tirooyinka si otomaatig ah.
La xiriir Maamulaha Barnaamijkaaga si aad uga caawiso haddii arintu sidan tahay; waxay kuu soo diri karaan warqad-xisaabeed cusub oo aan toos u soo koobi karin tirooyinka.
Gacanta ku dar wadarta guud ee Warbixinta Waxqabadka A-19. Iska ilaali inaad ku xirmaan unugyada kale ee ku jira warqadda faafinta.
Hubso in wadartaadu ay kaliya laba jajab tobanle ku jiraan sentiyada.
Waxaa la ii sheegay inaan iska ilaaliyo isticmaalka "6: Kharashaadka kale ee COVID-19" ee ku saabsan Warbixinta Waxqabadka A-19, laakiin ma arko qayb kale oo ku habboon. Maxaan sameeyaa
Waa inaad iska ilaalisaa inaad u isticmaasho Qeybta 6 ee Warbixinta Waxqabadka A-19.
Tixgeli ujeeddada kharashka iyo sida ay ugu habboon tahay qaybaha 1-5. Ka fikir “Kale: Cinwaan” ku jira qaybaha 1-5 oo habboonaan lahayd.
Ma inaan galiyaa kharashyada hoosta qaybta "Kharashaadka ka badan $ 1,000"?
Ma aha inaad gasho kharashyada qaybtan.
Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad buuxiso Foomka Warbixinta Waxqabadka A-19 oo ay bixiyaan faahfaahinta kharashyada.
Sax ku calaamadee sanduuqa “Dhammaan kharashyada ka hooseeya $ 1,000.” Hubinta sanduuqan ayaa kuu oggolaaneysa inaad ka booddo qaybtaan gebi ahaanba.
Meelaha CRF (La cusbooneysiiyay 9-1-2020)
Xaashida Xaqiiqda ee CRF
Tilmaamaha CRF Tilmaamaha (La cusbooneysiiyay 9-2-2020)
Hantidhowrka CRF Su'aalaha Inta Badan La Weydiiyo (Waa la cusbooneysiiyay 10-19-2020)
Khasnadda OIG Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo (La cusbooneysiiyay 9-21-2020)
Tilmaamaha Barnaamijka CRF (La cusbooneysiiyay 10-5-2020)
Imtixaanka Qiimaha U Qalmida CRF
Ganacsiga CRF Su'aalaha Inta Badan La Weydiiyo (La cusbooneysiiyay 10-30-2020)
CRF A-19 Shahaadada Bixinta
Warbixinta Waxqabadka CRF
Dejinta SWV #: Xafiiska Maamulka Maaliyadda
Xafiiska Hantidhawrka Gobolka DARYEEL Xeerka Hanuuninta